Iindaba-Iingcebiso zokuthenga umatshini wokusika / wokukrola we-laser
Inyathelo 1: Umba wokuqala yinkxaso.
Kuninzi ukungenisa okungabizi kakhulu, ikakhulu okuvela eChina, kwintengiso. Kodwa ii-lasers ngoomatshini abanzima kwaye bayaphula kwaye bafuna ukulungiswa. Qinisekisa ukuba inkampani oyithengayo inokuthenjwa kwaye inikezela ngenkxaso elungileyo kuwe nakumatshini wabo emva kokuba uyithengile.
Nayi eminye imibuzo onokucinga ngayo:
Kunzima okanye kulula kangakanani ukufumana izinto ezinokutshintsha?
Ngaba banenkxaso ye-tech?
Kulula kangakanani ukuphendulwa umbuzo?
Ngaba banayo iwebhusayithi elungileyo?
Ngaba zikho izifundo zokusebenzisa kunye / okanye ukulungisa umatshini?
Inyathelo 2: Ukukhetha umatshini. Ubungakanani kunye naMandla.
Imicimbi emibini ephambili endiya kugxila kuyo xa kufikwa ekukhetheni umatshini bubungakanani bebhedi namandla e-laser.
Ubungakanani bebhedi boomatshini buya kugqiba ukuba ingakanani into enokulingana nayo kumatshini ukusika okanye ukukrola. Ibhedi enkulu iya kukuvumela ukuba usike okanye ukrobe iziqwenga ezinkulu kwaye nokuba wenza into encinci, njenge-laser cut jewelry, ibhedi enkulu iya kuvumela ukusika iziqwenga ezininzi ngaxeshanye kunokuba ibe nye ngexesha. Kananjalo abanye oomatshini banebhedi emiselweyo kwaye abanye banebhedi enokuhla inyuka. Ibhedi eya phezulu naphantsi ikuvumela ukuba ukrobe izinto ezinobungakanani obahlukeneyo. Ubunzulu bokusika abuguquki kodwa ukuba ufuna ukukrola ilogo kwisihlangu sesikhumba kunakwisiqwenga seflethi, unebhedi onokuyithoba ukuze ufumane isihlangu kumatshini kubalulekile.
Inqaku elilandelayo ngamandla e-laser. Amandla e-laser alinganiswa kwii-Watts. Amanzi amaninzi anamandla ngakumbi kwi-laser. I-laser, bendiyisebenzisa, iqale nge-30 watt laser kwaye emva koko yaphuculwa yaya kwi-50 watt. Amandla e-laser abaluleke kakhulu ekusikeni. Khumbula ukutyeba kwezinto ezinokusikwa yi-laser kumiselwe yindawo ekujolise kuyo ilensi hayi amandla elaser. Ke ukongeza i-laser enamandla ngakumbi ayikuvumeli ukuba usike izinto ezijiyileyo. Kodwa iya kukuvumela ukuba usike ngokukhawuleza kwaye uthembeke ngakumbi. I-laser ebuthathaka iya kuthetha ukuba icothise i-laser ukuze ikwazi ukusika kakuhle.
Ndingacebisa ukuba ufumane owona matshini mkhulu unakho kwaye uqale nge-laser ebuthathaka. Ibhedi enkulu iya kukuvumela ukuba usebenze kuyilo olukhulu okanye usike kwaye ukrobe iziqwenga ezininzi ngaxeshanye. Ungayihlaziya i-laser kuyo ukuze ube namandla ngakumbi kamva.